Maalinta: Sebtember 21, 2019
Soo Qaado Baaskiilkaaga Kaalay
Capital Ankara, 22 waxaa ka buuxsami doona cayaaraha waxayna martigalin doontaa munaasabado midab leh Axadda, Sebtember. 22 ee Ankara iyadoo qayb ka ah Toddobaadka Dhaqdhaqaaqa Yurub ee loogu dabaaldegay adduunka oo dhan [More ...]
Isticmaalka Baska ee Denizli ayaa soo jiidasho leh
Qabanqaabada ay hirgalisay Dawladda Hoose ee Magaalada Denizli ee gaadiidka dadweynaha waxaa soo dhoweeyay qaybo badan. Gerzele, Hallaçlar, Zeytinköy iyo Kervansaray Xaafadaha Mukhtars waxay aad ugu qanacsan yihiin qabanqaabada laga sameeyo basaska dowlada hoose iyadoo dadka daggan xaafada [More ...]
Baaskiillada baaskiillada Folk ayaa ku dhamaanaysa dooxada Sunflower
Dowlada hoose ee magaalada Sakarya waxaa loo keenay magaalada Sunflower ee Baaskiil Dooxada Ahilik Toddobaadka oo lagu qabtay baaxadda dalxiis ee baaskiillada dadweynaha lagu marti qaaday. Qeybta Adeegyada Dhallinyarada iyo Cayaaraha ee Magaalada Sakarya [More ...]
Maraakiibta Doonyaha Ku Laabto oo ku Laabto Izmir
Iyada oo ay iska kaashanayaan degmada İzmir Magaalo-Weyne iyo Rugta Ganacsiga ee İzmir, maraakiibta maraakiibta ayaa lasiiyay si ay u sameeyaan duullimaadyo joogto ah oo mar kale taga İzmir. Duqa Magaalada Izmir Tunç Soyer iyo Xubinta Gudiga Ganacsiga Izmir [More ...]
Elektra Elektronik si loo Sameeyo Xarunta R&D ee 2020
awoodda wax soo saarka, tirada shaqaalaha, dhoofinta iyo R & D heerka maalgashiga transformer low-danab iyo hogaamiyaha warshadaha nuclear ee Turkey eego shirkadda, Elektra Electronics, dalalka 6 60 qaaradda ee transformer maxalliga ah iyo kuwa wadaniga ah [More ...]
Wax ka badalida Sharciga TCDD ee Sharciga 1 Sanad kordhinta
The Republic of Turkey Tareennada State (TCDD) TCDD Gaadiidka Inc. iyo oggolaansho inay qaataan shahaadooyin badbaadada lagama maarmaan iyo ammaanka ka shaqeeya gaadiidka dadweynaha rail magaalooyinka ka shaqeeya wakhti dheeraad ah 1 sano [More ...]
Gawaarida Dadweynaha ee Kocaeli ayaa bilaabatay ilaa maanta
Ka dib socdaalkii gaadiidka ee Kocaeli, qiimaha cusub ee loo yaqaan 'tarif' ayaa bilaabmay ilaa maanta. Gudaha Izmit, 3 wuxuu gaadhay gaadiidkii magaalada. Xarunta Isuduwaha Gaadiidka Dawladda Hoose ee Magaalada Kocaeli (UKOME) 5 Sebtember kulan ku saabsan gaadiidka dadweynaha [More ...]
Iyada oo la furayo 2019 - 2020 xilli xilli waxbarasho, GaadiidkaPark A.Ş. oo ay maamusho Akçaray, ardayda ayaa lagu daadiyay. 1 trams, halkaas oo 93 kun oo arday 448 ah ay u safraan usbuuc kasta, [More ...]
Korjoogteyn adag ee Adeegyada Ardayda ee Kocaeli
Gaadiidka Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli iyo Kooxda Maareynta Wadooyinka ee Gawaarida Gawaarida, gawaarida adeega ardayda ayaa hubinaya. Baaxadda kormeerka, dokumentiyada sida dukumiintiyada iyo rukhsadaha gawaarida adeegga ardayda ayaa la hubin doonaa oo la wargalin doonaa. [More ...]
21 iyo 22 waxaa lagu qaban doonaa IMM Orhangazi City Park bisha Sebtember. [More ...]
Maanta in History September 21 1923 Eastern Tareennada isugu yimid iyadoo koox ka mid ah shirkadda British Bank Turkey ee National Tareennada (Railvvays Qaranka ee Turkey) aasaasay. Toddobo ka mid ah shirkadda maanta loo aqoonsaday inay tahay Ingiriiska [More ...]